XOG: Jawaari iyo kheyre oo labadaba qarka usaaran in Xilalkooda ay waayaan…[Sababta?] | Allbanaadir News	XOG: Jawaari iyo kheyre oo labadaba qarka usaaran in Xilalkooda ay waayaan…[Sababta?]
XOG: Jawaari iyo kheyre oo labadaba qarka usaaran in Xilalkooda ay waayaan…[Sababta?]
Mar haddii uu Barlamanka soo shaqo galay waxaa la filayaa inuu dalka horay u dhaqaaqo waayo dadka waxa badan ayey barlamanka iyo xildhibaannada ka sugayaan.
Ugu horreyn waxay saxeen khalad dayacaad iyo mas’uuliyad xumo dawladeed dalka lagu geliyey iyadoo mar hore wax laga qaban karay. Shirkadda DP world oo Imaaraadka laga leeyahay oo rabtay inay boobto dhammaan dekadaha Somaliya ayaa dalka laga eryey waana tallaabo bogaadin mudan. Waxaana barlamanka laga sugayaa inuu saxo dhammaan khaldaadkii la galay intii uu fasaxa ku maqnaa oo uu ka dhigo geel caruur qaadday ma foga.
Iyadoo shaqada iyo middiyaha uu barlamanka wax ku saxo, waxna ku badalo ay mooshin yihiiin ayaa waxaa xalay bilowday nuxnux ah in Xildhibaanada aqalka hoose ee Barlamanka Federaalka Soomaaliya ay wadaan mooshin ka dhan ah Guddoomiye Maxamad Cismaan Jawaari kaasoo ay ku eedanayaan qodobo dhowr ah.
Warar lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in tirada mudanyaasha saxiixey mooshinkaan looga soo horjeedo Jawaari ay ilaa iyo hadda marayaan cadad aad uga badan intii loo baahnaa inay ka keeni karto mooshin gudoomiyaha Barlamanka, waxaana la filayaa in si degdeg ah loogu dhiibo gudoonka barlamanka mooshinkaan.
Mooshinkaan ka dhanka ah Gudoomiyaha Barlamanka hadii Xildhibanadaan gudbiyaan sida sharcigu dhigayo Maxamad Cismaan Jawaari waxaa uu dhex fadhiisanayaa mudanyaasha kale inta doodiisu socoto, mana guddoomin doono shirkaas.
Waxaa noo suurta gashay in aan ogaano cidda aadka u waddo mooshinkaan, waxaana soo baxday inay xoog badan gelinayaan RW Xasan Cali Kheyre iyo Shariif Xasan Sheekh Aadan oo kaashanaya xildhibaano u badan Koofur Galbeed. Sidoo kale waxaa Muqdisho Online u sugnaatay in Xildhibaan Cabdullaahi Goodax Barre iyo Daahir Amin Jeesow uu RW Kheyre u xil saaray dardar gelinta mooshinka ka dhanka ah Guddoomiyaha Baarlamaanka JFS Maxamed Cisman Jawaari.
Waxaa in muddo ahba la hadal hayey in cidda ugu horreysa ee mooshin laga keeni doono ay noqon doonto R/Wasaare Kheyre,
Waxaa jiraa guux ah inuu jiro mooshin loo meeldayayo oo kheyre la rabo in looga takhaluso walisa isma soo tarayo, waxaasa laga yaabaa inuu dardar geliyo mooshinka hadda socda ee Jawaari ka dhanka ah. Jawaari oo aad u yaqaanna sida looga hortago mooshinnada ayaa waxaa la leeyahay inuu dhinaciisa ka bilaabay mooshin Kheyre ridis ah.